खानीखोला गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खुलालको जीवन भोगाई (विगतदेखी—वर्तमानसम्म) – NamoBuddha Khabar
खानीखोला गाँउपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर खुलालको जीवन भोगाई (विगतदेखी—वर्तमानसम्म)
मंगलबार, मंसिर ११, २०७५ | ६:५९:०७ |
सजना आचार्य :
“युगले नेतृत्व जन्माउँछ कि नेतृत्वले युग जन्माउँछ ।”
यो बखत काभ्रेको कर्णाली भनेर चिनिने डाँडापारीमा युग जन्माउने अभिभारा कुष्ण बहादुर खुलालको हो भन्दा अस्वाभाविक नहोला । आफ्नो जीवनको दुई विस भन्दा बढि समय सामाजिक र राजनितीक क्षेत्रमा समर्पण गरेका खुलाल यहि अभियानमा हुनुहुन्छ जहाँ जनताको भरोसा साथमा छ ।
प्रावि शिक्षकको स्थायी जागिरबाट राजिनामा दिएर राजनितिमा होमिएका खुलाल हाल काभ्रेको खानीखोला गाँउपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँ, आमा धनमाया खुलाल र बुवा धन बहादुर खुलालको कोखबाट वि.सं. २०२५ साल असार ८ गते काभ्रेको साविकको फलामेटार गा.वि.स. वडा नं. २ को खानीडाँडामा जन्मिनुभएको हो । ६ जना दाजुभाई र ४ जना दिदिबहिनी मध्य आफु ठुलोकान्छो भएको बताउने खुलाल परिवारमा आफुलेनै सबैभन्दा बढि औपचारिक शिक्षा हासिल गरेको बताउँनुहुन्छ । त्यत्तिबेला फलामेटारमा विद्यालय नभएका कारण उहाँले गुरुकुलबाट पढाई प्रारम्भ गर्नुभयो ।
गुरुहरु राम प्र. तिमल्सिना र रामराजा सिम्थिङ्गले त्यहाँका दश पन्ध्र जना विद्यार्थि भेला गराएर फलामेटारको पिपलडाँडामा गुरुकुल शिक्षा दिनुहुन्थ्यो । गुरुकुलबाट शिक्षा लिँदै गर्दा फलामेटारमा अहिलेको बाल विकास मावि स्थापना भयो र उक्त विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म औपचारिक रुपमा अध्ययन गर्नुभयो खुलालले । कक्षा ४ मा जन विकास मावि ताल्ढुङ्गामा भर्ना भई अध्ययन अगाडी बढाउनुभएका उहाँ पढाईमा अत्यन्तै लगनशिल र मिहेनती थिएको उहाँका शिक्षकहरु बताउँछन् । खुलाल पढाईका साथसाथै भलिबल खेल्नमा समेत उत्तिकै रुची राख्नुहुन्थ्यो ।
उच्च शिक्षा,जागिर र राजनीतिक चेतना :
पञ्चायती व्यवस्था ठिककी बहुदल ? यसको छिनोफानोका लागि भएको २०३६ सालको निर्वाचन समेत नजिकैबाट नियाल्नुभयो उहाँले, कक्षा आठ -नौ पढ्दादेखी नै एमाले निकट विद्यार्थि संगठनको कोषाध्यक्ष भइसकेकाले देशको राजनीतिक अवस्थाबारे जानकार नहुने कुरै भएन । त्यो नै उहाँको राजनितिक जीवनको पहिलो कदम थियो ।
२०४२ सालमा जनविकास माविबाट एसएलसी उतिर्ण गर्ने पहिलो ब्याच उहाँको नै थियो । ४२ जनाले एसएलसी दिएकोमा १३ जनामात्रै उतिर्ण भएका र त्यसभित्र कृष्ण बहादुर खुलाल पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यत्तिबेला डाँडापारीमा एसएलसी पास गर्नु भनेको अत्यन्तै ठुलो कुरा थियो र मान सम्मान पनि उत्तिकै हुन्थ्यो । अहिलेको जस्तो डिग्रि पास गरेर पनि जागिरका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था थिएन त्यत्तिखेर । एसएलसी पास भएपछि अभिभावकहरु जागिरका लागि घरमै लिन आँउथे । डाँडापारीमा विद्यालयहरु खुल्ने क्रम पनि बढिरहेकै थियो त्यो बखत । शिक्षकको अभाव पनि उत्तिकै । एसएलसी पास भएको सुनेपछि खुलाललाई पनि धेरै अभिभावकहरु घरमै लिन आए ।
अभिभावकको अनुरोध नकार्न नसकेपछि उहाँले बाल विकास माविमा अध्यापन सुरु गर्नुभयो । करिब २ वर्ष अध्यापन गरेपछि अध्यापन छाडेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि राजधानीको आर आर क्याम्पस प्रवेश गर्नुभयो । उक्त क्याम्पसबाट आईएड सकेर २०४५ सालको शिक्षक सेवा आयोगको परिक्षाबाट प्रावि को स्थायी शिक्षकमा नाम निकाल्न सफल हुनुभयो । तत्कालिन साल्मेचाकल गाविसको जन विकास मावि ताल्ढुङ्गामा स्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्ति भई पुन अध्यापन सुरु गर्नुभयो । अध्यापन सँगसँगै आफ्नो अध्ययनलाई पनि निरन्तरता दिन थाल्नुभयो । उहाँले बनेपाको चैतन्य क्याम्पसबाट बिएड उतिर्ण गर्नुभयो ।
हालको जन विकास उच्च माविमा उहाँ शिक्षकको भुमिकामा मात्रै सिमित रहनुभएन,विद्यालयको भौतिक पुर्वाधारको विकास तथा गुणस्तर सुधारमा उहाँको भुमिका अतुलनिय रह्यो । चाडवाड आएपछि विद्यालयको आयोजनामा सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने देखी लिएर देउसी भैलो खेल्ने कार्यक्रम समेत हुने गर्दथ्यो । देउसी भैलो खेलेको रकमबाट विद्यालयको नाममा जग्गा खरिद गरि विद्यालयको भवन निर्माणमा समेत उहाँको भुमिका महत्वपुर्ण थियो । त्यसो त उहाँका शिक्षक सहकर्मि शिव बहादुर देउजा र झापाका अन्य शिक्षक साथीहरुको पनि त्यहाँको जनस्तरलाई अगाडी बढाउने र सामाजिक कार्यमा उत्प्रेरित गराउन उत्तिकै साथ र सहयोग थियो । त्यत्तिखेर उहाँ शिक्षक संगठन जिल्ला कमिटिको सदस्य समेत भइसक्नुभएको थियो । शिक्षकहरुको हक हितका पक्षमा लड्नेक्रममा उहाँको राजनीतिक छवि उँचो बन्दै गयो ।
जनविकासमा लगभग ४ वर्ष अध्यापन गरिसकेपछि उहाँ काभ्रेकै च्याम्राङ्गवेशीको एक विद्यालयमा सरुवा हुनुभयो । २०५० सालमा अध्यापनका क्रममा च्याम्राङ्गवेशी पुग्नुभएका उहाँले त्यहाँ लगभग ३ वर्ष विताउनुभयो । त्यहाँ रहँदा पनि सामाजिक र राजनैतिक गतिविधिमा उत्तिकै क्रियाशिल हुनुभयो । यसैबीचमा २०५३ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने अवसर सिर्जना भयो । स्थायी शिक्षकको जागिर राजिनामा दिएर साविकको साल्मेचाकल गाविसको वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । स्थानियको जीवनसँग राम्रै घुलमिल भएका कारण उहाँमाथि जनताको विश्वास बढ्दै गयो । २०५४ साल असारमा भएको तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको निर्वाचनमा अत्याधिक मतले जिल्ला विकास समितिको सदस्यमा विजयी हुनुभयो ।
परिवारको साथ,जनताका खातिर जीवन उत्सर्ग :
स्थायी शिक्षकको जागिरबाट राजिनामा दिएर पुरा जिवन नै सामाजिक सेवा तथा राजनितिमा समर्पण गर्ने अठोट गर्नु पनि सामान्य कुरा भने थिएन । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर समाजको हित र जनताको भलाईका निम्ति उहाँ निरन्तर लागिरहनुभयो । राजनितिक रुपमा क्रियाशिल रहनका लागि परिवारबाट समेत उत्तिकै सहयोग र समर्थन थियो । यसले पनि उहाँको राजनितिक यात्रालाई अझ सहज बनायो ।
डाँडापारीका विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यमा समेत उहाँको भुमिका महत्वपुर्ण रह्योनै । २०५४ देखी २०५९ सालसम्म जिविस सदस्यको कार्यकालमा रहँदा खोपासी—ताल्ढुङ्गा सडक विस्तार, स्थानिय स्तरमा लगु जलविद्युत आयोजना स्थापना गरि विजुली बत्तिको पहुँच पुर्याउने, खानीखोला, चाउखोला तथा दुर्लुङ्गखोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण, धारा, ट्वाइलेट जस्ता डाँडापारी भेगको समग्र विकास निर्माणको कार्यको लागि खुलालको भुमिका महत्वपुर्ण रहेको यार्थथ स्थानियवासी खुलेरै भन्छन् ।
राजनीतिक यात्रा र माओवादी शसस्त्र द्धन्दमा बाँचेको पल :
विचार र आस्थाको हिसावले उहाँ दशकौंदेखी नेकपा एमालेका ईमान्दार,निष्ठावान कार्यकर्ता,डाँडापारीका जनताका पहरेदार । एमालेको इलाका सदस्य,इलाका कमिटिको सचिव हुँदै जिल्ला कमिटिको सदस्य भएर पार्टिलाई योगदान दिइरहनुभयो । त्यसक्रममा देशमा चर्किदै गएको माओवादी शसस्त्र द्धन्द्धलाई नजिकबाट बुझ्ने अझ भनौं कठिन परिस्थीतिको सामना गर्दै ति समय भोग्नुभयो ।
द्धन्द्धकालको समयमा राजनितिमा क्रियाशिल रहनु अत्यन्तै जोखिमपुर्ण थियो । यस्तै जोखिमका बिचमा पनि राजनितिमा निरन्तर क्रियाशिल रहिरहनुभएका उहाँ २०५८ साल असार ३ गते तत्कालिन नेकपा माओवादीबाट अपहरणमा पर्नुभयो । काभ्रेको ढुंखर्कबाट सोधपुछ गर्नुछ भन्दै तत्कालिन माओवादीले अपहरण गरेका उहाँलाई ३ दिनसम्म वेपत्ता पारे । तेस्रो दिन साल्धाराको कोदोखोरिया पुर्याएका थिए र त्यहि दिन उहाँलाई अपहरण गरि राखेको घरमा एक्कासी बम पड्कीयो ।
बम पड्केको समयमा घर बाहिर भएका कारण उहाँ बाँच्न सफल भएपनि बमको छर्राले भेटेर घाइते पर्नुभयो । २ जना माओवादीको समेत उक्त घटनामा मृत्यु भएको सम्झनुहुन्छ उहाँ । घाइते भएका खुलाललाई भने स्टेचरमा राखेर बनेपाको शिर मेमोरियल अस्पताल पुर्याएर उपचार गरियो । यसरी उहाँ मृत्युको मुखबाट बाँच्न सफल हुनुभयो । त्यो दिनको घटना उहाँको मानसपटलमा अझै ताजै नै छ । भिन्न आस्था र विचार बोकेकै कारण पनि यसरी पिडित हुनुपर्ने अवस्था थियो त्यो द्धन्दकाल, उहाँ आफ्ना विचार र आस्थाबाट कहिल्यै विचलित हुनुभएन ।
२०६२÷ ६३ को जनआन्दोलनमा समेत सहभागी भएका कृष्ण खुलालले त्यसपश्चात् नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि काभ्रेको सदस्य तथा डाँडापारी इन्चार्ज भएर काम गर्न थाल्नुभयो । प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा निरन्तर डाँडापारीबासीको समग्र उत्थान र विकासका लागि राजनितिक र सामाजिक रुपमा उहाँको क्रियाशिलता कायम रहिरह्यो ।
संगठनको सांगठानिक आधार छाता संगठनको विस्तार भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै डाँडापारिमा एमालेको छाता संगठनको विकास तथा विस्तारका लागि उहाँको भुमिका महत्वपुर्ण रह्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ –“नेता भनेको एक सामाजिक मान्छे हुनुपर्छ, शोषित पिडित जनताको लागि निस्वार्थ भावनाले काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर सामाजिक विकासको निमित्त कार्यहरु गर्न सँधै अग्रसर रहनुपर्छ ।” यहि विचार बोकर सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा होमिनुभएका खुलालले वास्तवमै पनि डाँडापारि वासीको मन जित्नुभएको छ ।
भुकम्प पश्चात् डाँडापारिबासीलाई राहत वितरणको कार्यमा समेत आफुले निस्वार्थ भावनाले सहयोग गरेको दावी उहाँको छ । यसमा उहाँको तर्क छ –“जनताको लागि ठुलो काम गर्नै पर्दैन, सानो सानो काममा सहयोग गरेर पनि जनताको मन जित्न सकिन्छ,ठुला ठुला काम भनेको जनताको सहभागितामै सफल हुन्छ जहाँ असल नेतृत्व हुन्छ ।” जनतासँग सहजै रुपमा घुलमिल गर्ने र सहयोगका लागि मरिमेट्ने कारण पनि आफु स्थानिय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित हुन सफल भएको दावी उहाँको छ ।
“अकालमा डाँडापारीबासीले मृत्यवरण गर्न नपरुन्” :
२०५६ सालमा ८ वर्षकी आफ्नी छोरीको असामयिक निधन भएको क्षण उहाँको जीवनको अविष्मरणीय क्षण भएको बताउँनुहुन्छ खुलाल । ताल्ढुङ्गाबाट सदरमुकाम आउनका लागि २ दिनको बाटो पैदल हिँडेर आउनुपर्ने बाध्यता त्यत्तिखेर थियो । आफ्नो छोरीलाई सामान्य ज्वरो हुँदै टाइफाइट भएपछि उपचारका लागि अस्पताल लाँदै गर्दा बिच बाटोमा छोरीको मृत्यु हुन पुग्यो । सडकको पहुँचको अभावका कारण आफ्नो छोरीले जस्तै अकालमा कसैले पनि मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्दै गाँउपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पहिलो प्राथमिकता सडकलाई दिएको उहाँको दावी छ ।
सुखदुखलार्ई जीवनको चौतारी मान्ने खुलाल भन्नुहुन्छ–“जीवन
मा दुख सुख त सबैलाई पर्छ । सुख भयो भनेर मात्तिनु हुन्न र दुख आइपर्यो भनेर हरेश खान पनि हुन्न । धैर्य गर्नुपर्छ । जिवन जिउने क्रममा आइपरेका उतारचढाव तथा समस्याहरुसँग विचलित नभइकन आफ्नो कार्यमा निरन्तर लागिरहने मानिस नै अन्तत सफल हुन पुग्छन् ।”
खुलाल आफु एसएलसी पास हुँदा सबैभन्दा बढि खुसी भएको स्मरण गर्नुहुन्छ । उहाँ जनविकासमा पढ्न जाँदा खानीखोलामा पुल नहुँदा खोला तर्ने क्रममा सत्तिघाटमा उक्त खोलाले बगाएर बल्ल बल्ल बाँचेको घटना पनि स्मरण गर्नुहुन्छ । उहाँ डाँडापारी क्षेत्रमा सामान्य र आधारभुत भौतिक पुर्वाधारको सम्म विकास नहुदा आफूजस्तै थुप्रै स्थानिय बारम्बार मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेको दुख विर्सनुहुन्न । जनजीविकाका यिनै घटनाहरुहरुले पनि गाँउपालिकाका कार्यक्रमहरु बनाउन सहयोग पुगेको छ उहाँलाई ।
स्थानिय चुनाव र विकासको लहर :
जनता र पार्टीको विश्वासका कारण २०७४ साल बैशाखमा भएको स्थानिय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमालेको तर्फबाट खानीखोला गाँउपालिकाको प्रमुखमा चुनाव लड्न टिकट पाउनुभयो उहाँले । अत्याधिक मतद्धारा निर्वाचित भएपश्चात्को क्षण उहाँको लागि जीवनको अर्को खुसीको क्षण थियो । स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात् लगभग दुई दशकदेखीको संक्रमण समाप्त भएको बताउनुहुन्छ उहाँ ।
दुई दशकसम्म स्थानिय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन हुन पुगेको,राजनीतिक संक्रमणकाल लम्बिदै गएको जस्ता कारणले डाँडापारीबासीले राज्यको उपस्थीति झण्डै सुन्यको अवस्थामा महसुस गर्न थालिसकेका थिए । अहिले निर्वाचन पश्चात हुन नसकेको विकासका ढोकाहरु खुल्दै गएका छन् । निर्माण सुरु गरेको दुई दशकसम्म खुल्ल नसकेको खोपासी ताल्ढुङ्गाको ट्याक उहाँ कै अग्रसरतामा भर्खरै खुलेको छ । दुई दिनको पैदल हिँडेर सदरमुकाम पुग्नुपर्ने खानीखोलाबासीको समस्या सम्भवत अन्त्य नै भएको छ ।
खानीखोलामा हस्पिटल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको छ । आगामी दिनहरुमा पनि खानीखोलाको बाटोलाई हिँउद वर्र्षैै चल्ने गरि स्तर उन्नती गर्ने, खानीखोलाको शिक्षाको गुणस्तर सुधार, फोन तथा नेटको सुविधा पुर्याउने जस्ता कामहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्ने योजना उहाँको रहेको छ ।
भोलीका दिन :
जनताहरुको सहयोग र विश्वासकै कारण उहाँले कहिल्यै थकानको महसुस गर्नुपरेको छैन । अहिलेको यो अबसर डाँडापारी जनताको पक्षमा काम गर्ने ठुलो अवसर रहेको बताउँदै उहाँ आफू सदैब जनताको पहरेदार बनिरहने प्रण गर्नुहुन्छ । उहाँ जीवन रहेसम्म यसरीनै राजनितिक तथा सामाजिक गतिविधिहरुमा क्रियाशिल रहने अठोट व्यक्त गर्नुहुन्छ । यहि नै उहाँको भावी योजना रहेको छ ।
(लेखक आचार्य खानीखोला गाँउपालिकाका प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ )